February 2018 – Sannla
ဟင်းချိုမှုန့်က ကြောက်စရာကောင်းတယ် ကြက်သားမှုန့်ကလည်း စိတ်မချရဘူး.. ကန်စွန်းဥနဲ့ ကိုယ်တိုင် ဟင်းခတ်မှုန့်လုပ် နိုင်ပြီ..။ ============================ Zawgy ဖြင်ဖတ်ရန် – အချိုမှုန့် အန္တရာယ် နေ့စဉ် စားသုံးနေသော အစားအစာများတွင် အချိုမှုန့် သုံးစွဲမှု၏ ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ မြဝတီ စာဖတ်ပရိသတ်များ ကျန်းမာရေး အသိပညာများ […]
ZawGyiဖြင့်ဖတ်ရန် တရုတ်မင်းသမီး Fan Bing Bing ရဲ့ နာမည်ကြီးစကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ . “သူဋ္ဌေးတွေကို ငါမယူ၊ ငါကိုယ်တိုင်သူဋ္ဌေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်” . ဒီလိုစကားကနားထောင်ရတာ အထက်စီးဆန်ပြီး ကြီးကျယ်လိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့။ ဒီကနေ့မှာ အဲဒီစကားထက် အထက်စီးဆန်တဲ့ အသွင်တူအဆိုတစ်ခုရှိလာခဲ့တယ်။ . “မင်းသမီး(princess)ဖြစ်ဖို့ အိမ်ရှေ့မင်းသားနဲ့လက်ထပ်စရာမလိုပါဘူး” . ဒီစကားကို Emma […]
ZawGyiဖြင့်ဖတ်ရန် ၁။ ရူတ်ရူတ်ရှက်ရှက်လည်းမကြိုက်တော့ဘူး၊ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်လည်း မဖြစ်ချင်တော့ဘူး၊ ကိုယ်ဖာသာကိုယ်ပဲ အေးအေးဆေးဆေး နေချင်တယ်။ ၂။ အသိမိတ်ဆွေဟောင်း ဆုံမိရင် ငြီးငြူတယ်။ ရင်ဖွင့်တယ်။ လူစိမ်းတွေနဲ့ကျတော့ ခပ်ဝေးဝေးနေချင်တယ်။ ၃။ တီဗွီမကြည့်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး ။ ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်လည်း သိပ်မရှိတော့ဘူး၊ စမတ်ဖုန်းတို့၊ ကွန်ပြူတာတို့၊ အိုင်ဘက်တို့ တစ်ခုခုရှိနေဖို့လိုတယ်။ […]
ပုံပါပို့စ်တခုကို မနှစ်ကတွေ့ခဲ့တယ်။ ပုံထဲကလိုကောက်ချက်မျိုး လွယ်လွယ်နဲ့မချသင့်ပါ။ Acetaminophen ကို Paracetamol ပါရာစီတမောလို့ ခေါ်တယ်။ ၁၈၉ဝ ကတည်းကပေါ်ခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ထဲကို ၁၉၅ဝ ကျော်မှာရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အနာအကိုက်ကို သက်သာစေသလဲည်းဆိုတာ မသိခဲ့ကြသေးဘူး။ အခုတော့ သုတေသနကနေ ဘယ်လိုဘယ်ပုံအလုပ်ဖြစ်စေတာကိုသိလာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဆေးကျောင်းသားဘဝ ၁၉၇ဝ ဝန်းကျင်၊ ဆေးဝါးဗေဒစာအုပ်ထဲမှာ […]
နှုတ်ခမ်းလေးတွေကြည့်ပြီး ကျွန်မတို့တွေ အများအားဖြင့်ပြောတတ်ကြတာက နှုတ်ခမ်းပါးရင် နှုတ်သွက်တယ်၊ နှုတ်ခမ်းထူရင် စကားနည်းတယ်ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာကြည့်လိုက်မှ လူအမျိုးမျိုး နှုတ်ခမ်းပုံစံ အမျိုးမျိုးပါပဲနော်။ကိုယ့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းပုံစံကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်လောက် ဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁။ နှုတ်ခမ်းထူထူနှုတ်ခမ်းသာထူထူ ပိုင်ရှင်တွေကတော့ နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသူကို အမြဲတမ်း ကူညီတတ်တယ်။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေိုချစ်တတ်တယ်။ […]
ကျေးဇူးပြု၍ အသိပေးအပ်ပါသည်။မိတ်ဆွေများ၏ဆွေမျိုးမိသားစုများထဲတွင် (၁၀) တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား/သူများ ရှိပါက အသိပေး မှာကြားပါရန်။တကယ်ကြီးဆို ကလေးတွေနစ်နာနိုင်လို့ပါ။Super Market များတွင် မှင်ဖြင့်ရေး၍ ဖျက်၍ ရသော(ခဲဖျက်ကဲ့သို့ဖျက်စရာပါ) သော ဘောပင်တစ်မျိုး ရှိပါသည်။ ၄င်း ဘောပင်၏ အားနည်းချက်မှာ စာရွက်ပေါ်တွင်ရေးပြီး သတ်မှတ်အပူချိန်ကျော်လွန်ပါက အလိုအလျောက် မှေးမှိန် ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ကြောင်း […]
ဘားအံ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၇ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့တွင် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီအချိန်က အမည်မသိ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် သံလွင်တံတားပေါ်မှ သံလွင်မြစ်အတွင်းသို့ ခုန်ချပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။ ဘားအံမြို့ဘက်မှ သထုံမြို့ဘက်သို့ အမည်နေရပ်လိပ်မသိ အသက်(၂၂)ခန့် ၊ ဆံပင်ဘိုကေ၊ အသားဖြူ ၊ […]
အိမ်ထောင်သက် ၃၁ နှစ်အတွင်းမှာ စိတ်ကူးလေးနဲ့တောင်မဖောက်ပြန်ခဲ့ဖူးပါဘူး မို့မို့မြင့်အောင် အရွယ်သုံးပါးချစ်တတ်သည် ဇာတ်ကားထဲမှာရန်အောင်နဲ့တွဲဖက်ပြီး အသက် ၇၀ အရွယ်အဖွားအိုပုံစံ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ စွယ်စုံရအနုပညာရှင် အကယ်ဒမီမို့မို့မြင့်အောင်နဲ့တွေ့ဆုံခိုက် . . .ဒီကားထဲမှာ မမို့က ၇၀ ကျော် အဘွားကြီးပုံနော် . . . ဟုတ်တယ်။ မိတ်ကပ်ဆံပင်ကို […]
မိန်ကလေးငယ်ငယ်​တွေသတိထားကြပါ။ နေ့ခင်း​ကြောင်​​တောင်​ပုံမှားရိုက်​ပြီး မိန်းမချင်းလုနည်းအသစ်​​ပေါ်​နေပါပြီ။ အဲ့ဒါက​တော့ ခပ်​ကြီးကြီးခပ်​​တောင့်​​တောင့်​ မိန်းမနှစ်​​ယောက်​က ခပ်​တည်​တည်​နဲ့ ရှေ့ကပိတ်​ရပ်​ပြီး ကောင်​မ လင်​ခိုးမ ဆိုပြီး ဘုမသိဘမသိ နဲ့ ဆံပင်​ဆွဲပါးရိုက်​ပြီး ငါ့လင်​ဆီကခြူထား တဲ့ပစ္စည်း​တွေ အကုန်​​ပြန်​​ပေးဆိုပြီး လည်​ပင်းကဆွဲ ထားတဲ့ဆွဲကြိုးကိုအတင်း ဖြုတ်​ယူတာပါ ။ အပျိူ ​လေးဆို​တော့ရုတ်​တရက်​ လူမှား အရိုက်​ခံရတယ်​ထင်​ပြီး […]
Zawgyi “လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ” ဆိုတဲ့ ရှေးလူကြီးတွေရဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်း ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ရှိတဲ့လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်နေသဘောထားတွေ တူနိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် တူညီတဲ့အချက်တစ်ချို့ကို ဘုံထုတ်ပြီး သွေးအမျိုးအစားအလိုက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားတဲ့ စစ်တမ်းတစ်ရပ်ကို စာဖတ်ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ “A” သွေး ပိုင်ရှင်များ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ […]